Sidee loo helaa WhatsApp kombuyutarka? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loo helaa WhatsApp kombuyutarka?
Waxaa laga yaabaa 1, 2021 0 comments 355
Waqtigan xaadirka ah waa u suurtagal dadka isticmaala barnaamijka fariimaha deg dega ah ee caanka ah ku hayso WhatsApp kombuyuutarka, tanna waxaa lagu samayn karaa laba siyaabood. Habka ugu horeeya ee loo sameeyo waa iyada oo la adeegsanayo waxqabadka websaydhka WhatsApp iyada oo loo marayo biraawsar, habka labaadna waa iyada oo la rakibo desktop-ka WhatsApp kombiyuutarka la doonayo.
Xulashada koowaad ee ku hayso WhatsApp kombuyuutarka Macnaheedu maaha in isticmaalaha uu rakibayo barnaamijyo, waxay u baahan tahay oo keliya inay xiriir internet ka leeyihiin kombiyuutarka iyo aaladda moobaylka labadaba, ikhtiyaarka labaad haddii ay u baahan tahay in barnaamijka lagu rakibo kombiyuutarka gudihiisa iyo si la mid ah labada aaladoodba waa inay lahaadaan xiriir internet.
Hayso shabakad WhatsApp ah kombuyuutarka adoo adeegsanaya shabakadda WhatsApp
para ku hayso WhatsApp kombuyuutarka adoo adeegsanaya ikhtiyaarka websaydhka WhatsApp waxay ku filnaan doontaa adeegsadaha inuu furo furaha biraawsarka ay doorteen oo uu dhigo bar cinwaanka http://web.whatsapp.com Markaad halkaa gaarto, bogga wuxuu furi doonaa tilmaamaha isticmaalka iyo lambar QR ah oo ay tahay in lagu baaro aaladda moobaylka.
Si loo baadho lambarkan QR, barnaamijka WhatsApp waa in lagu furaa aaladda moobaylka, ka dibna adeegsadehu waa inuu ku tilmaamaa kamaradda qalabka shaashadda kombiyuutarka, isagoo si gaar ah diiradda u saaraya meesha uu ka muuqdo lambarka QR, tani waxay u oggolaan doontaa inuu furo codsiga kombiyuutarka Y ku hayso WhatsApp kombuyuutarka.
Waxyaabaha ay ka kooban yihiin isticmaalka shabakadda WhatsApp.
Isticmaaluhu waa inuu ogaadaa waxyaabo muhiim ah ku hayso WhatsApp kombuyuutarka Iyadoo loo marayo mareegta WhatsApp, tan ugu horreysa ayaa ah inay mar walba lagama maarmaan u tahay labada aalad inay ku xirnaadaan internetka, intaas waxaa u dheer tan, shabakadda WhatsApp ma ahan dhammaan howlaha WhatsApp ay ku leedahay noocyadeeda aaladaha mobilada.
Sidaa darteed si ku hayso WhatsApp kombuyuutarka Iyadoo loo marayo websaydhka WhatsApp, isticmaalaha ayaa arki doona xaddidnaanta shaqooyinka qaar ee barnaamijka, tusaale ahaan shaqooyinkaas la xiriira abuurista iyo maaraynta kooxaha, abuurista liisaska warfaafinta, soo deynta iyo soo dhaweynta wicitaannada fiidiyowga iyo wicitaanada, iyo sidoo kale dirista istiikarada, isticmaaluhu sidoo kale wuxuu yeelan doonaa xadidaadyo uu ku isticmaalo goobta shaqada, iyo kuwo kale.
Ku hayso WhatsApp kombuyuutarka adoo adeegsanaya WhatsApp desktop
Tani waa ikhtiyaar fudud oo fudud ku hayso WhatsApp kombuyuutarkaWaxay kufilan doontaa oo kaliya isticmaalaha inuu kala soo baxo feylka la fulin karo oo ay kujiraan barnaamijka desktop desktop barnaamijka rasmiga ah ee WhatsApp. Waa inaad ku rakibtaa barnaamijkan kombiyuutarkaaga oo aad raacdaa tilmaamaha dejinta.
Kadib markaad dhamays tirto talaabooyinkan oo dhan, waxaad furi kartaa arjiga fariimaha ee kumbiyuutarkaaga sidii hal barnaamij oo dheeraad ah, kaas oo ku hayso WhatsApp kombuyuutarka adigoon isticmaaleyn biraawsarka iyo adeegsiga barnaamij gooni ah.
Waxaa xusid mudan taas si ku hayso WhatsApp kombuyuutarka Ikhtiyaarkan isticmaalaha waa inuu ku xaqiijiyaa barnaamijyada qaarkood iyo shuruudaha qalabka. Marka hore, waa inaad xaqiijisaa in nooca nidaamka qalliinka kombiyuutarkaaga uu u dhigmo nooca lagu muujiyey bogga rasmiga ah ee WhatsApp, iyo sidoo kale in processor-gaagu la jaan qaadayo desktop-ka WhatsApp.
1 Hayso shabakad WhatsApp ah kombuyuutarka adoo adeegsanaya shabakadda WhatsApp
1.1 Waxyaabaha ay ka kooban yihiin isticmaalka shabakadda WhatsApp.
2 Ku hayso WhatsApp kombuyuutarka adoo adeegsanaya WhatsApp desktop
Sidee loo helaa Twitch Prime?
Sidee looga Baahiyaa Twich?